Wararka Maanta: Jimco, Apr 12, 2013-Madaxweynaha Soomaaliya oo shaaciyay inay sii soconayaan dib u habeynta lagu sameynayo Ciidamada iyo Dagaalka Al-shabaab (SAWIRRO)
Xasan Sheekh ayaa hadalkan ku sheegay khudbad uu maanta ka jeediyay dabaal-deg loo sameynayay sannadguuradii 53-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka oo ku beegnayd maanta oo Jimco ah.
“Muddada aan xilka hayo ee aan ahayn sida sharcigu qabo taliyaah guud ee ciidamada waxaan joogteynayaa dib u habeynta ciidamada, meesha aan maanta joogno ma ahan halkii aan ku ekaan lahayn balse waa sii socon doonnaan,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynuhu wuxuu ammaanay ciidamada xoogga dalka isagoo sheegay in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalladii ay la galeen Al-shabaab; balse looga baahan yahay in howsha ay halkaas kasii wadaan tan iyo inta dalka oo dhan uu noqonayo ammaan uu qof walba miishii uu ku tagayo nabadgalyo.
“Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waa laf-dhabarka dalka iyo sharafta Qarankan,” ayuu madaxweyne Xasan Sheekh ku yiri khduabdiisa isagoo intaas ku daray: “Waxaan munaasabaddan awgeed hambalyo u dirayaa ciidamada xoogga iyo shacabka Soomaaliyeed.”
Madaxweynuhu wuxuu sii raaciyay hadalkiisa: “Waan inaan caddeynaa howsha aan leennahay waa inaan difaacno dalkeenna, dadkeenna iyo diinteenna. Looma dulqaadanayo in askariga ka tirsan ciidamada qalabka sida uu sharciga jabiyo. Waxaad khatarta u gelisay naftaada waa dalkan, sidaa daraadeed waa waa inaad difaacdaa sharaftiisa.”
Sidoo kale, wuxuu ka hadlay dagaalka lagula jiro Al-shabaab oo uu ku sheegay inay tahay koox aan nabad doonayn, isagoo xusay in dagaalka ay kula jiraan uu sii socon doono inta dalka oo dhan laga sifeynayo.
“Joogtaynta la dagaalanka argaagaxisa waa mid sii soconaysa inta dalka laga waayayo argagaxiso iyo cid fowdo sameynaysa, illaa laga gaaro heer dadka oo dhan ay shacabka ku hoos noolaadaan ma joogsanayo dagaalka,” ayuu carrabka ku dhajiyay madaxweynaha.
Dhanka kale, wuxuu ammaan iyo bogaadin u jeediyay ciidamada AMISOM ee ka socda shan dal oo Afrika ka mid ah iyo kuwa Itoobiya oo uu sheegay inay dalka u joogaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen Al-shabaab oo uu sheegay inay tahay koox argagxiso ah, isagoo xusay inay dadaalkaas abaal weyn uga hayaan.
Munaasabadda loogu dabaal-degayay maalinta ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee 12-ka Abriil ayaa ka dhacday wasaaradda gaashaandhigga iyadoo la xiray inta badan jidadka Muqdisho iyo kuwa soo gala, waxaana la dhigay ciidammo fara badan oo ammaanka suga inta xafladdu socotay.